November 2, 2017 – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Muqdisho(fMN)—Maanta oo kale Sanad walba waxa dunidda dacaladeeda laga xusaa maalinta caalamiga ee soo af-jaridda Ciqaab la’aanta Denbiyada laga galo warfidiyeennada ka howl-gala hay’adaha warbaahinta,gaar ahaana kuwooda kashaqeeya goobaha ay ka jiraan dagaalada iyo maamuladda […]
Shir Ku Saabsanaa Amniga Iyo Horumarinta G/Banaadir oo Muqdisho Lagusoo Gabagabeeyay.
Muqdisho (FMN)—Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna duqa Magaaladda Muqdisho, Mudane Taabit Cabdi Maxamed oo ay wehliyeen qaar kamid ah Masuuliyiin Maamulka Gobolka, ayaa soo xiray Barnaamij looga hadlayey Amniga iyo horumarin Caasimadda. Barnaamijkan oo ah […]
Mugaabi Oo Doonaya In Dib Loo Soo Celiyo Xukunkii Dilka Ahaay Ee Dalkaas.
Harare(FMN)—Madaxweynaha Dalka Zimbabwe;Robert Mugaabi ayaa codsaday in dib loo soo celiyo ku dhaqanka xukunkii dilka ahaay ee lagu fulin jiray dadka denbiyada waaweyn gala ee dal kaasi ka jiri jiray. 93 jirkaan muddada dheer soo […]
XAMAR MA LAHAAN JIRTAY JID-XADIID TAREENADU MARAAN?-Maqaal.
W/Q:-Cabdulqadir Abiikar Xuseen Magaalada Xamar ee caasimada wadanka Soomaaliya waxay leedahay taariikh dheer; laakiin waxaan la ogayn inay lahaan jirtay jid-xadiid ah oo Tareenku maro. Halkan waxaan ku soo koobay cilmi baaris ku aadan Taariikhdaas […]
Qaar Ka Mid ah Odayaasha Dhaqanka Ee Soomaaliya oo War-murtiyeed Kasoo Saaray Xaaladda Dalka Soomaaliya Ku Suganyahay.
Muqdisho(FMN)— Odayaashii 135-ta ahaay ee soo xulay Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya oo ah Duubabka Qaranka Soomaaliyeed intooda badana ku sugan Gobolka Banaadir oo ka kulmay xaalada amni ee dalka Soomaaliya ayaa war ay soo saareen waxay ku […]
Jaamacadda Jig-jiga oo Kaalin Fiican Ka Gashay Jaamacadaha Itoobiya.
Jig-jiga—FMN—Jaamacadda Jig-jiga ee Ku taala xarunta Dawladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Magaalada jig-jiga ayaa sanadkan kaalinta 3aad ee dhanka waxqabad-wanaagga ku guuleysatay kadib qiimayn lagu sameeyay Guud ahaan Jaamacadaha iyo Macaahidda waxbarashada jiilka labaad ee […]
Ciidamo Itoobiyaan ah oo ka soo Gudbay Xadka Gobolka Gedo uu la leeyahay Itoobiya.
Doolow–FMN– Wararka ka imaanaya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in Maanta Ciidamo Itoobiyaan ah oo aad u qalabeysan ay ka soo gudbeen Xadka Gobolka Gedo uu la wadaago Itoobiya,waxaana Ciidamada ay ka soo gudbeen dhanka degmada Doolow […]
Shariif Xassan Oo Mooshin Laga Keenay.
Baydhabo(FMN)—Wararka aanu ka helayno Magaalada Baydhaba ee xarunta u ah Maamul-goboleedka Koonfur-galbeed,ayaa tibaaxaya in ay dib usoo cusboonaadeen dhaq-dhaqaaqyadii Mucaarad ee lagu doonayo in xilka looga tuuro Madaxweynaha maamul-goboleedkaasi Shariif Xassan Sheekh Aaden.. Mooshinkan Cusub […]